Dancing Cubes Echichi Isiokwu - Imewe Mmewe
Echichi Isiokwu Nhazi a na-emekorita ya na isiokwu gosipụtara site na modulu. Ejiri usoro a na-agbatị onwe ya iji jikọọ cubes isii ma ọ bụ karịa na ngalaba nwere ike ịnwe atụmatụ atọ. Nhazi ụdị mpempe akwụkwọ na notches na-eme ka njikọ ahụ yie ndị na-agba egwu gbara gburugburu. Ofhazi obere oghere na -emepụta ụlọ obibi maka isiokwu na akụkụ ahịrị.
Aha oru ngo : Dancing Cubes, Aha ndị na-emepụta ya : Naai-Jung Shih, Aha onye ahịa : Naai-Jung Shih.
Echichi Isiokwu Naai-Jung Shih Dancing Cubes